QR Code ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Converter, Wiegand မှဖို့အတွက် QR Code ကို USB မှတ်, Wiegand မှဖို့အတွက် QR Code ကို RS232, QR Code USB to Wiegand Access Control Converter, QR Code RS232 to Wiegand Access Control Converter
QR Code ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Converter, Wiegand မှဖို့အတွက် QR Code ကို USB မှတ်, Wiegand မှဖို့အတွက် QR Code ကို RS232, default အ output ကို WG26 / WG34
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ် QR Code ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Converter, Wiegand မှဖို့အတွက် QR Code ကို RS232, QR Code RS232 to Wiegand Access Control Converter, Wiegand မှဖို့အတွက် QR Code ကို USB မှတ်, QR Code USB to Wiegand Access Control Converter
Wiegand Converter မှဖို့အတွက် QR Code ကို RS232
default baud rate ကို: 9600.
ပုံရိပ်ဖတ်ကိရိယာ၏ output ကို 9600 / n / 8/1 သို့မဟုတ် 115200 / n / 8/1 သို့သတ်မှတ်ထားဆက်သွယ်ရေး parameters များကိုအတူတစ် RS232 interface ကိုသူဖြစ်ရမည်.
default output ကို: Wiegand 26 / Wiegand 34.
Wiegand Converter မှဖို့အတွက် QR Code ကို USB မှတ်
USB-Wiegand converter ကိုတိုက်ရိုက် access ကို Controller ကို၏ 12V power supply ကိုအသုံးပြုသည်, နှင့်ကို USB စကင်နာသာမန်စစ်ဆင်ရေးများအတွက် converter ၏ USB အပေါက်မှချိတ်ဆက်.
အဆိုပါ scan ဖတ်ဘားကုဒ်ကိုနှင့် QR ကုဒ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အဆုံးရထားပြန်လာသင်္ကေတပါဝင်ရပါမည်. အဆိုပါစံကို USB-Wiegand converter ကိုမှတက်အသိအမှတ်ပြုရန်နိုင်ပါတယ် 10 ဂဏန်း, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအက္ခရာများနှင့်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များထွက် filtered ပါလိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သော filtering ပြီးနောက်အဖြစ် ” http://abc12345.com%678″ ကျန်ကြွင်း, သာနံပါတ်များကိုစွန့်ခွာ “12345678”. အခြားထည့်သွင်းခြင်းနှင့် output ကိုကို formats data တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပေး.
USB-Wiegand converter ကို default အနေဖြင့် Wiegand34 signal ကို Output ဖြစ်ပါတယ်, စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးဝင်ရောက်ခွင့် controller ကိုစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့သင့်လျော်သောအရာဖြစ်ပါသည်. အခြားအ Wiegand ကို formats data တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပေး.
အဆိုပါချိတ်ဆက်ကို USB device ကို interface တွင် HID ကို USB protocol ကိုနှင့်သဟဇာတဖြစ်ဟုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်. ပုံမှန်က USB QR ကုဒ်ကိုစကင်နာ, USB မှတ်ကဒ်စာဖတ်သူကို, USB ကသံလိုက်ကဒ်ပွတ်ဆွဲစက်, USB ကဘားကုဒ်ကိုသေနတ်, USB ကကီးဘုတ်, စသည်တို့ကို. ပုံမှန်အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်.
USB မှတ် converter ကို input ကို power supply: 9-15V ကို 50mA
USB မှတ် converter ကို output power ကိုထောက်ပံ့ရေး: 5V ကို 200mA
USB က interface ကို protocol ကို: HID
converter အရွယ်အစား: 75× 41 × 30mm
I am interested in your product QR Code Access Control Converter, Wiegand မှဖို့အတွက် QR Code ကို USB မှတ်, Wiegand မှဖို့အတွက် QR Code ကို RS232, default အ output ကို WG26 / WG34
prev: TCP / IP Converter မှ Wiegand, Wiegand Two-လမ်း WG26 / WG34 Converter မှ Network ကို, Wiegand RJ45 Converter မှ Network ကို
နောက်တစ်ခု: Wiegand Interchange Converter, Wiegand အမျိုးမျိုး Bit ကူးပြောင်းခြင်း Module မှ Wiegand